Ichokwadi NezveAmerican Bully - Inobereka
Ichokwadi NezveAmerican Bully
Anotyisa here? Hasha? FUNGA FUTI. Iyo Anodheerera eAmerica imbwa hachisi chinhu kunze kwekugumbuka.
Yakagadzirwa chaizvo kushamwaridzana , imbwa iyi ichagara padivi pako kusvika parufu paunoparadzanisa.
Nemhando dzeBully, zvisungo zvine hukasha uye rusarura zvakajairika.
Ndiri pano kuzokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezveAmerican Bully, saka iwe uzive chokwadi nezve iyi imbwa ine rudo usati wafunga kana iri irwo rudzi rwakakodzera iwe.
Chii chinonzi American Bully?
Yakavakwa Senge Tangi
Akaberekwa kuva Shamwari Yako Yepamwoyo
Kudzidzisa an American Bully
American Kudheerera Hutano Hwechokwadi
Kutsvaga Akanakisa eAmerican Bully Breeder
Imbwa Dzinobereka Izvo Zvakafanana neAmerican Bully
Mhedziso: IAmerican Bully Rudzi Rwewe Here?
Yekutanga American Bully yakaverengerwa mu United Sitetsi pakati pa1980 na1990.
Pfungwa isina kujairika ndeyekuti yakafanana neiyo Pit Bull. Ichi chi HANDI CHOKWADI . IAmerican Bully ine maPit Bull majeni mune yayo yekutanga magene kodhi, asi mamwe maBull Imbwa marudzi akasanganiswawo mukati, zvichipa iyo American Bully mutsauko wayo.
Icho chibereko chekusundira kure nePit Bull yaive hapana tsaona, kana. Vaberekesi vanoshuvira vakatsvaga imbwa ine zvemitambo kuvaka uye a yakaderera kurwa drive. Aya hunhu ndizvozvo chaizvo nei American Bully iri kukurumidza kusimuka seimwe yemhando dzakakurumbira nhasi.
American Bully yakazivikanwa zviri pamutemo ne YeAmerican Bully Kennel Kirabhu muna 2004, uko kwakazvarwa rudzi uye chizvarwa chekuchengetedza chakachengetedzwa. Izvo zvaizivikanwa ne United Kennel Kirabhu muna 2013.
Unogona kufananidza iyo Pit Bull uye American Bully mune ino vhidhiyo:
IAmerican Bully inoratidzira inodiwa hunhu hweBully, senge rakapamhamha kumberi, rinorema mabhonzo, squarish musoro ne shaya dzakakura uye mapfupi, makumbo etsandanyama. Mboro yakareba uye haina kumbomira.
Rudzi urwu runouya mukati 4 saizi . Hezvino izvo zvaunoda kuziva.
Standard: Ichi chi 20 mu (51 cm) imbwa iri pakati nepakati ine mhasuru muviri uye block musoro.
Homwe: Iyi imbwa inosvika 17 inches (43 cm) uye, sezvaunofungidzira, imbwa diki-saizi.
XL: Mukomana mukuru, mhando iyi inosvika pakureba kwe Masendimita makumi maviri (51 cm).
Zvekare: Iyi American Bully inogovera zviyero zvakafanana neyakajairwa, asi chii chinoiisa parutivi kubva kune mamwe matatu marudzi ndiko kuvaka kwayo. Muviri wemuviri wakaderera, une makumbo marefu uye furemu yakatetepa. Iyo yekare inonzi yakafanana nePit Bull kupfuura mamwe marudzi.
Kana zvasvika kuAmerican Bully uremu, inosiyana nehurefu hwese. Muchokwadi, vese Vanodheerera veAmerica vanoonekwa sevakaenzana muhukuru kusvika gore rimwe zera. Ichi chiyero chepakati uremu hunogona kubva 66 kusvika ku88 lb (30-40 kg).
Nekuda kwehurefu hwayo hwakasiyana / huremu hwehurema, iyo American Bully inogadzirira yakanaka chero mamiriro epamba , ingave furati iri muguta kana imba ine yadhi. Ingo sarudza saizi inokodzera iwe.
Kana iwe ukaona 'Pocket Bully', 'Micro' kana 'XXL' mhando dzakashambadzirwa nevarimi, ziva kuti aya mazwi ari isingazivikanwe neABKC.
Kana iwe ukawana diki reAmerican Bully uye urikufunga imbwa dzinoratidza sebasa, ramba uchifunga kuti imbwa diki kwazvo dzinowanzo kurangwa kana kutoregererwa yekusaenderana nezvinodiwa zvehurefu zvinotarisirwa.
Iyo Yakadzika Yekuchengetedza American Vanodheerera
Imwe yemhando dzakanakisa dzerudzi urwu ndeyekuti yakaderera sei kuchengetedza. IAmerican Bully mitambo a kapfupi, rakatsetseka bhachi iyo inogona kupinda chero mhando yemhando.
Kunyangwe iri HAPANA hypoallergenic , bhachi iri yakaderera shedding. Unongoda chete kukwesha Bully wako kamwechete pasvondo. Hapana chikomba chinodiwa, saka ndiyo imwe mari yekuwedzera inogara muhomwe yako!
Ramba uchifunga kuti imbwa iyi inokodzera mamiriro ekudziya. Kana iwe uchigara mudunhu rinotonhora, haufanire kuchengeta yako American Bully panze zvachose.
American Kudheerera Kuruma Simba
Vamwe vanhu havana chokwadi neAmerican Bully nekuda kwezvikonzero zvishoma. Pakutanga yakarerwa kubva kuPit Bull, ine kutyisa kutaridzika uye inoshandiswa kazhinji sembwa yekurinda.
Zvinogona kuve zvakaoma kubvarura maziso ako kure neiyo American Bully's hombe shaya. Asi, iwo ndiwo masimbi esimbi ayo anofanira kutyiwa?
Ini handina kukwanisa kuwana fungidziro chaiyo yeichi rudzi rwekuruma simba rePSI. Asi, isu tinogona kutarisa iyo Gomba renzombe uye American Bulldog kuwana nzwisiso iri nani.
Iyo Pit Bull ine PSI ye235 . Ichi chiuno chakaringana simba rekurumwa uchienzaniswa nedzimwe mhando dzembwa. Kunyange zvakadaro, zvinonyanya kudaro mukurumbira une njodzi nemidzi mukurwira imbwa izvo zvinoita kuti Pit Bull ikurume kutyiswe.
Iyo American Bulldog kuruma simba iri 305 PSI , iyo inorongedza yakawanda yechipfuva kupfuura iyo Pit Bull. Rudzi urwu harusi kutarisirwa sehasha, kugovana mukurumbira neAmerican Bully yekuve imbwa yemhuri yakapfava.
Aya ese ari maviri marudzi eBully, saka tinogona kuunganidza kuti iyo American Bully kuruma simba kungave kune imwe nzvimbo pakati 200 uye 300 PSI renji.
Chero rudzi rwembwa runogona kuruma zvakaoma, asi zvinoenderana ne muridzi uye iyo huwandu hwekushamwaridzana iyo imbwa yakagamuchira iyo inosarudza maitiro ayo. Naizvozvo, iri harisi simba rekurumwa kuti utye!
Kana iwe uri kutsvaga shamwari imbwa, iyo American Bully isarudzo yakanaka kwazvo. Mushure mezvose, iyi imbwa yakaberekerwa yakanangana nechinzvimbo.
Zvinoenderana nemhando yekuzvara, iyi iri chivimbo uye Zvemagariro imbwa. Haufanire kunetseka nezvehunhu husingafungidzirwe kana hunhu.
Iyo American Bully haina kukahadzika kana kungwarira. Pane kudaro, anozotsika-tsika kuti asangane neshamwari dzako, nekukurumidza ave chikamu chevashandi.
Ndeapi mamwe emamwe maitiro anoshandiswa kutsanangura hunhu hwerudzi urwu? Akavimbika, ane rudo uye nyoro pamusoro pechinyorwa.
American Bully iri akangwara kwazvo , Kumirira uye kutarisa usati waita danho. Anoda kufadza, saka unogona kumutarisira kuti adzidze nekukurumidza uye apindure asingazungunuke kuteerera.
Ichi chi zvine simba kwazvo pup, saka ramba uchifunga kuti kana akasamuwana wezuva nezuva koriori kupisa chikamu, anogona kuiburitsa pane shangu dzako kana fenicha.
Rudzi urwu runoita zvakanaka nevana here?
Iyo Pit Bull yakatumidzwa kunzi ' Nanny Imbwa ”Munhoroondo yese, saka hazvishamise kuti American Bully inozivikanwa kuva mutsvene kutenderedza vadiki.
Hapana hutsinye, hapana kufudza, uye hapana bumping! Kana imbwa yako iri zvakanaka-kushamwaridzana , achakweverwa kune hunhu-husina hanya nehunhu hwevana. Roughhousing zvakanaka, haazoiti. Panzvimbo iyoyo, iyo American Bully icharega vana vachikwira pese paari!
Kunyangwe uine rudzi rwei iwe unokurudzirwa usambosiya imbwa iri yoga nemwana mudiki.
Zvinoita zvakanaka nezvimwe zvipfuyo?
Iyo American Bully inongova imbwa yemagariro. Anoda kuve ari pedyo nevamwe, kusanganisira mhuka dzinovaraidza. Sezvo nerudzi rupi zvarwo, kushamwaridzana kubva paudiki kwakakosha kuti uve nechokwadi chekuti mwana achave kugadzikana mumamiriro ezvinhu matsva .
Tichataura zvakawanda nezvekushamwaridzana padiki padiki, asi kazhinji, iyo American Bully inogadzira pal yakanaka kumba nedzimwe mhuka dzako dzepamusha kana kupaki yembwa.
Iye weAmerican Anodheerera?
Ngatimirei titaurirane nezve hukasha hwembwa. Nemhando dzeBully, kunyanya imbwa ine Pit Bull midzi, stereotypes uye zvisizvo fungidziro zvazove zvakajairika.
Pasina kupokana, imbwa idzi dzakakasharara, dzinogadzikana uye dzakasimba. Vanokunda pamitambo uye vanogona kutora chero dambudziko repanyama nefaese.
Vanotaridzika kunge vakaoma, vane mhasuru dzinobvunda uye shaya dzinotyisa.
Dambudziko riri mukati kurwisa imbwa . Vanodheerera (kunyanya Pit Bulls) vanonyanya kushandiswa mumitambo yakaipa yeropa. Imbwa dzinorererwa zvakanakira hukasha, zvichikanganisa hunhu hwekuti uve akavimbika uye munyoro.
Idzi imbwa kwete huwandu hwerudzi. Vanoshungurudzwa nevanhu, zvichitungamira mukushungurudzika kunoguma nenyaya dzekuzvibata.
Ndicho chikonzero nei zvichikosha kuti urangarire kana kusarudza muberekesi, kuona kuti watenga mbwanana iyo yakatanga hupenyu munzvimbo ine rudo.
Saka, HERE iyo American Bully iri kwete nechisimba . Izvo zvese zvinoenderana nemageneti, kuberekesa, uye kurovedza (izvo, zvinoenda chero chero imbwa dzinoberekesa).
Kunyangwe iwe uchifunga kusarudza splurge pane nyanzvi imbwa mudzidzisi kana uchida zviitise iwe pachako, kurovedzwa zvirokwazvo kunokurudzirwa yeAmerican Bully.
Iyi imbwa inoda basa uye ichave inoteerera nepese painogona kuitira kufadza muridzi wayo waanoda.
Saiye muridzi, zvakakosha kuve chivimbo, moyo murefu uye kusimba , asingamboratidzi kuora mwoyo. Izvi hazvibatsire chete dzidzisa imbwa ndiani shefu , asi zvinokurudzira nharaunda yekuremekedza nekutevera mirau.
Idzi nzira nhatu dzakanakisa dzekudzidzisa dzerudzi rweAmerican Bully
1. Kudzidziswa kwekrate
MaAmerican Bully vana vanoshaya bladder control kusvika 3 mwedzi yemakore . Kiredhi kudzidziswa inofanirwa kuitwa nekukurumidza paunouya nemwana wako kumba.
Kupedza shoma nguva mu crate kunobatsira kugadzira maitiro. Zvakare, imbwa zvakasikwa usade kuita tsvina kwavakarara.
Iyo crate inova inozivikanwa, yemunhu 'bako' apo imbwa yako inogona kunzwa yakasununguka uye yakachengeteka.
2. Kuteerera kudzidziswa
Kuteerera hunhu hunozivikanwa nerudzi urwu. Vanodheerera veAmerica vanobva ku imbwa inoshanda kumashure uye unozodzidza kutevera mirairo nekukurumidza. Ndicho chikonzero nei vachiita zvakanaka mumitambo uye vanoita zvakanaka imbwa dzinorinda / dzekushandira.
Nekukudziridza kuteerera pakutanga, iwe unozopihwa mubairo neyakavimbika, inozvibata-zvakanaka imbwa inonzwisisa ndimi munotarisira.
Iwe unogona kuhaya hunyanzvi mudzidzisi, asi kana iwe uchizviita iwe pachako, ive shuwa kunamatira kuchirongwa. Kubatana kwakakosha nemhando iyi yekudzidziswa. Unofanira zvakare dzikama , usingambopopota kana kupa kusagadzikana.
3. Kugarisana nevamwe
Iyi ndiyo nzira yakakosha yekudzidzira yeAmerican Bully. Iye akanaka nevana asi anogona kudaro mira-offish nedzimwe imbwa kunze kwekunge zvakanaka kusangana kubva pazera diki.
Unogona kumuzivisa kune dzimwe imbwa nekumuunza kupaki yembwa pakupera kwevhiki. Muchengetedze pane leash uye rega iye zvishoma nezvishoma aswedere kune furry shamwari kune kusangana-uye-kwazisa. Munguva pfupi, maitiro ake echisikigo ekuva anobuda achatora nzvimbo uye achange achizunza muswe wake kusangana nevanhu vese.
Kana zvasvika kune hutano, iyo American Bully inoita chaizvo. Iyo ine avhareji yehupenyu hwe Makore masere kusvika gumi nemaviri.
Nechero rudzi rwembwa, pane zvirwere zvemajini izvo zvakajairika uye zvinofanirwa kutariswa. Izvo zvinoenda kune American Bully. Nzira yakanakisa yekudzivirira izvi zvirwere ndeyekungwarira pakusarudza muberekesi. Ini ndicharova pane izvi gare gare!
Heino runyorwa rweanowanzozivikanwa eAmerican Bully nyaya dzehutano.
Hip Dysplasia: Hip dysplasia hurema hunonetseka nekuti haugone kuonekwa kusvika imbwa yakura. Kukura zvisina kujairika kwekubatana kwechiuno kunotungamira mukuremara kunorwadza uko kunozopedzisira kukonzeresa kurasikirwa kwekufamba kana kuremara.
Kuchenesa muromo / muromo: Ipo pakuzvarwa, uku kukanganisa kwemuromo wepamusoro kana muromo. Haisi yekutyisidzira hupenyu, asi yakachena chete. Kuvhiya kuri nyore ndiko kwese kunotora kugadzirisa mamiriro aya.
Patella inodhura: Uku kukura zvisina kujairika kunokonzeresa kuti kneecap yembwa isuduruke.
Kuberekwa kwemoyo kukundikana: Ichi chiitiko chine njodzi apo moyo unowedzerwa. Izvi zvinotungamira kune zvinwiwa zvinoburitswa mumuviri wese.
Demodectic mange: Ichi utachiona hunokonzera kurasikirwa nevhudzi uye nemaganda paganda.
Ichthyosis: Iyi inyaya yeganda inokonzeresa uye kusvuura paw pads.
Pamusoro: Ichi chiitiko chakajairika cheganda chinokanganisa imbwa uye chinokonzera kusagadzikana.
Cerebellar abiotrophy: Neraki, mamiriro aya anogona kuonekwa mazuva mashoma mushure mekuzvarwa kwembwanana. Ichi chirwere chinobata huropi uye huta hurongwa.
Kufambira Mberi Retinal Atrophy: Izvi chirwere chemaziso inokonzeresa kuparara zvishoma nezvishoma kwemaziso. Isingarapike, inogona kutungamira kuhupofu.
Hypothyroidism: Nekuda kwechirwere chetachiona, chiitiko chinodzora uye kuwedzera huremu kuri padhuze.
Kurwara: Ichi chimwe chirwere chemaziso chinokonzeresa imbwa kurasa kuona kwayo zvishoma nezvishoma. Inogona kugadziriswa nekuvhiyiwa.
American Bully chow nguva
Zvinokurudzirwa kuti udyise yako American Bully 3 nguva pazuva.
Kupa chikafu kuAmerican Bully kunotora kutarisisa sezvo rudzi urwu runotambura kufutisa, Kurwara kweganda , uye gassiness . Nekunamatira kune chikafu chakaringana zvine hutano, aya matambudziko anogona kudzivirirwa.
Unogona kusarudza mbishi chikafu, iyo inosanganisira organic miriwo, michero, nhengo yenyama, hove, nyama yenguruve, turkey nemazai. Kudya uku kwakazara nehutano uye hapana chimwe chekuchengetedza, zvinowedzera, uye zvinowedzeredza zvinowanikwa mutsika imbwa inobhururuka.
Kuchengeta chikafu chisina kugadzirwa chikafu kunogona kutora nguva uye kuchidhura kune vamwe. Pane kudaro, sarudza iyo premium, yakakwira standard imbwa chikafu kune yako American Bully. Ita shuwa kuti yakazara ne mapuroteni uye akakura carbs (kwete chibage).
Iye anorovedza muviri
American Bully ishamwari ine simba inoshuvira nguva yekutamba. Iwe unofanirwa kumurovedza kweinenge an awa zuva rega rega, o r zvimwe iye anowana kutsiva nekuve anoparadza akatenderedza imba.
Heano mamwe mazano ekuchengetedza yako American Bully ichifamba uye isingambofinha.
Kufamba: Iyi inogara iri sarudzo yakanaka! Tora imbwa yako parwendo rurefu, nekukurumidza mupaki kana kunyange nzira dzekufamba musango.
Kushambira: Izvi zvinonyanya kunaka kana iwe uchigara munzvimbo inopisa. Kushambira kwakanakisa kune imbwa uye mwenje pamajoini. Kanda bhora mudziva uye tarisa yako American Bully ichiita kupenya.
Agility kudzidziswa : Izvi hazvisi izvo chete zvinonetsa imbwa yako panyama, asi nepfungwa zvakare. Nekosi yekudzidzira kugona, iwe unosvika pakuteedzera kuteerera.
Kutasva bhasikoro: Tanga kudzidzira nekutengesa zvishoma nezvishoma imbwa yako ichitsika padhuze nebhasikoro rako. Munguva pfupi yakwana imi vaviri muchange muchibvarura nzira.
Matoyi nemapuzzle: Chengetedza mari inorema-basa chew matoyi kuti upe yako American Bully chimwe chinhu chekuruma pazuva rinonaya kunze kweshangu dzako. Imbwa mapuzzle anomutsa uropi, chinova chinhu chinofarirwa nerudzi urwu.
Kana kuve neAmerican Bully kuri pamusoro pezvaunofanira kuita, saka ngatinyurirei mune chimwe chezvikamu zvakakosha zvegwara rino: kutsvaga vafudzi.
Kutanga, gadzirira kugadzira dhishi rakakomba. Iyo American Bully mutengo renji iri pakati $ 2000 uye $ 5000 . Iyi imbwa inozivikanwa!
Iwe unogona kufunga kuti kutsvaga imbwa inobereka iri nyore sekutsvaga kweGoogle. Chaizvoizvo, kune akawanda matsvuku mireza ekutarisa kunze pakusarudza muberekesi.
Iwe unozoda kuzvidzidzisa iwe pachako maitiro ekufambisa nzira yako kuburikidza neese madhiraini embwa kuti umhara pane anokunda.
Ungadzivisa sei zvigayo zvembwanana?
Ita musangano wekushanyira muberekesi . Puppy zvigayo hazvidi kuti iwe uone mamiriro asina hunhu kwaanopomba mbwanana sefekitori.
Anobereka zvine hunhu anokukoka iwe kuzoshanya, uchifara kukuratidza iwe padhuze. Iwe uchazosvika pakuona kana imbwa dzichitamba panze kana dzichionekwa kune dzimwe mhuka nevanhu uye iwe uchazosangana nekusangana nevabereki.
Enda kune imbwanana inodhura zvakati wandei. Iwe uri kubhadhara yemhando, yakachena yeropa, uye hutano vimbiso.
Kumbira kubvumidzwa kwehutano. Mufudzi ane mukurumbira anozoita kuti imbwa dziongororwe nachiremba uye dzicheneswe zvirwere zvechibereko, zvakadai sehudyu dysplasia.
Sangana uye ukwazise nevabereki . Izvi zvinokuudza iwe mirwi pamusoro pemamiriro ekurapa uye mamwe maitiro ehunhu.
Kumbira zvipupuriro. Kuverenga nezve zvakaitika kare zvevatengi zvinokupa iwo iwo chaiwo mufananidzo.
Tsvaga rudzi rwekutanga. Kana zvasvika kune Vanodheerera veAmerica, vamwe vafudzi vasina hunhu vachapomba imbwa nema steroid kuti dziite kuti dziwonekere dzakanyanya mhasuru. Kwete izvi chete zvine njodzi kuhutano hwavo, asi mushure mechinguva, iyo steroids inopera kuratidza imbwa diki iwe yausina kubvumirana nayo.
Izvo zvese nezve kubvunza mibvunzo! Iwe unofanirwa kuve wakagadzirira kubvunza mubereki mibvunzo uye zvinopesana.
Anofarira kubereka anoda vana vavo uye achazoda kuona kuti vanoenda kumuridzi ane basa. Ivo vachatoda kuramba vachikurukura kwemwedzi mishoma yekutanga mushure mekunge mbwanana yaenda kumba newe.
Tine iwe wakafukidzwa neaya anozivikanwa maAmerican Bully vafudzi kuti utarise.
Razor'sEdge Vanodheerera : INOENDA
Dhiyabhorosi Den Vanodheerera : KUSHANDISA
Kukura kweTexas Vanodheerera: FL
American Bully anonunura & pekugara
Iyo nyowani nyowani yemutengo mutengo inogona kunge isisiri kwauri. Hapana dambudziko! Unogona kuwana vakanaka Vanodheerera veAmerica pakununurwa.
Idzi imbwa dzinotapira dzakamirira kuenda kumba kwavo kusingaperi uye kukugezesa nerudo. Heino yedu runyorwa rweAmerican Bully kununura uye dzimba. Ivo vane akasiyana marudzi eBully marudzi, asi iwe unogona kutarisa kumashure kuAmerican Bully.
Anoshamisa Nyasha Kudheerera Kununura : FL
New York Vanodheerera Crew : NEW
Maodzanyemba Evanonunura Kununura : SC
Mhando dzekudheerera dzinogovana chinhu chimwe chete: Dzakabva kune yekare Molosser imbwa, kungofanana neiyo Canis Panther, kana iyo American Bandogge , inova musanganiswa wemhando dzakasiyana dzeMolosser.
Kazhinji inoratidzwa se hasha , mhando idzi dzinowanzo kutakura mutoro wekuve nenjodzi. Nekuda kweiyi mukurumbira, dzimwe imbwa, senge iyo Pit Bull, vari kurambidzwa mune dzimwe nyika.
Ichokwadi ndechekuti, marudzi eBully haasi echisimba. Kunyangwe ivo vangataridzika kutyisa neyakavaka mhasuru, ivo vari imbwa dzinofambidzana pamoyo. Ndiwo mabatiro anoita vanhu nekusimudza kwavo canine dzinovaraidza dzinoisa maitiro.
Zvichida iyo American Bully haisi yako. Izvo zvakanaka, kune akawanda akawanda anoshamisa emhando dzeBully.
Heino runyorwa rwembwa dzinogovana zvakafanana.
American Gomba Bull Terrier
Olde Chirungu Bulldogge
Iwe unogona zvakare kuda kuongorora iyo Chidiki Chirungu Bulldog .
American Bully vs. Pit Bull: ndeupi musiyano?
Pakutanga kuona, unogona kushamisika kuti chii chinoita kuti marudzi maviri aya akasiyana zvakanyanya. Muchokwadi, pane akati wandei misiyano yakakosha.
Chinhu chikuru chinosiyanisa ndechekuti Chimiro . IAmerican Bully ine musoro muhombe ine snubby snout kana ichienzaniswa neiyo yakatetepa kumeso iyo Gomba renzombe .
American Bully iri mupfupi kupfuura iyo Bhuru reGomba, kunyanya nekuda kwemakumbo ayo. Yega yeClassic mhando yeAmerican Bully inozivikanwa kuva neavhareji-saizi makumbo.
Kana zvasvika pakuvaka, iyo Pit Bull inonyatso kuzivikanwa nemhasuru yayo uye nekukakavara, asi mhasuru ndiyo imwe yehunhu hukuru hwakaitwa neAmerican Bully kuratidza. Anorema mapfupa, rakakura chipfuva uye gobvu maficha anoita kuti ive yakasimba robust canine.
MaAmerican Bully neAmerican Bulldog zvakafanana here?
Mhinduro pfupi ndeye AIHWA , hadzina kufanana.
Iyo American Bulldog mutsika icon, yagara kwenguva yakareba kupfuura American Bully. Pakutanga yakaberekwa kubva iko zvino kutsakatika Old Chirungu Bulldog , yakaunzwa kuUS nevatorwa.
IAmerican Bulldog yakaberekerwa basa repapurazi , pamwe nembwa dzinoratidza uye mitambo. IAmerican Bully, kune rimwe divi, ibara rePit Bull, rakaitirwa kushamwaridzana.
Iwe unogona kunyatso kuudza aya maviri emarudzi akasiyana neawo Chimiro . IAmerican Bulldog yakareba, iine makumbo marefu uye yakareruka, yakareruka muviri. Musoro wakareba kupfuura uya weAmerican Bully.
Yakavakwa sechikara, iyo American Bully imhasuru mayhem! Usanzwe kutyisidzirwa neiyo yakafara, yakakura chipfuva uye hombe seti yeshaya. Iyi imbwa ine yakawanda yakawanda rudo yekupa.
Ngatiitei zvekudzokorora nekukurumidza pane irudzi urwu, uye iwe unogona kusarudza kana iri mutambo wako.
Wide zvakare kushamwaridzana
Vanodheerera ndi 'Nanny Imbwa', saka ivo ita zvakanaka nevana
Yakanyanya kungwara uye nyore kudzidzisa
Yakadzika yekugadzirisa kushambidzika ( HAPANA hypoallergenic )
Inokodzera mafurati nedzimba nekuda kwemhando dzakasiyana saizi
Anonyanya mukuratidzira, makwikwi uye sembwa yebasa
Iwe unozofanirwa kupa yakaringana nguva yekudzidzira, kunyanya kushamwaridzana . Izvi zvinodikanwa kukurudzira kuvimba kwakakomberedza dzimwe imbwa nevanhu.
Kufutisa, gassiness, uye allergies eganda zvakajairika, saka hutano (dzimwe nguva hunodhura) kudya zvinodikanwa.
Simba rakakwirira rinoreva kurovedza muviri zuva nezuva inofanirwa kudzivirira hunhu hunokuvadza.
Iwe unofungei nezve American Bully? Tiudzei mune zvakataurwa!
Kuvhima Imbwa Mazita: 475+ Akanaka, Akanakisa uye Akasarudzika Hound Mazita
1001 Yeakakurumbira Musikana Imbwa Mazita
chinanazi chinokuvadza imbwa
mazita embwa dzechirume pitbull puppies
chocolate lab yakasanganiswa nepitbull puppies
mazita embwa dzakanaka dzepitbulls